Azonao atao ve ny miresaka amiko momba ny backlinks ambony sy ny lisitry ny tranonkala ahafahana mifandray?
Andeha hojerentsika izany - manana pejy maimaim-poana ho an'ny tranokalanao na blôginao mba hahalalako azy sy hitenenana matetika amin'ireo loharano malaza hafa amin'ny PageRank avo dia fomba tsara hahazoana ireo backlinks mendrika ho an'ny SEO. Amin'izany fomba izany, tsy vitan'ny hoe mankasitraka ny mpihaino anao ianao, fa mitombo kosa ny fahefana matanjaka sy marika amin'ny raharaham-barotra ataonao. Eny ary, ambany eto aho dia hanampy anao hahalala bebe kokoa momba ny backlinks sy ny lisitry ny tranonkala hita ao amin'ny tranokala mifandray amin'ny raozy.
Quantité VS. Quality
Raha ny momba ny fikarakarana ny SEO ny lala-mahitsy, dia ny paikady fanorenana fikambanana organika ihany no hatao ho an'ny tranonkalanao. Raha tsy te hanisy ratsy ny fivoaran'ny tranokalan-tserasera na ny blôginao ianao ao amin'ny SEO amin'ny ambaratonga, sy ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala misy anao,. Miasa mafy mba hahazoana rindran-kaopy ambony avy amin'ny lisitry ny tranokala avo lenta sy ny fahefana ambony, azafady mba hisorohana ny fampiasana fitaovana maoderina sy ny fananganana rindrambaiko na fifanakalozana fifanakalozana. Ny zavatra dia ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa spammed, loharano tsy misy ilàna azy na toerana maloto hampifandray anao amin'ny. Raha ny tena izy dia mifandray amin'ny zava-maloto amin'ny ankapobeny izy ireo, toy ny filokana, fanitsakitsaham-bady ary famokarana tsy misy fanafany. Amin'izany fomba izany, ny ankamaroan'ireo tetikasa fananganana rohy dia tsy afaka manao na inona na inona momba ny organic SEO. Raha ny marina dia matetika izy ireo no afaka manome ny tranokalanao na blôginao miaraka amin'ireo rohy manara-dresaka ambany ravin-tserasera avy amin'ny loharanom-bahiny mitovy amin'izany, fa tsy manome anao topclix ambony ambony amin'ny lisitry ny lisitry ny tompon'andraikitra azo itokisana.
Fananganana orinasa na tsy misy fifandraisana
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahazoana fiarovana ambony Maro ny tranonkala fifandraisana amin'ny tranokalanao na ny bilaogy dia manangana fifandraisana mahasalama amin'ireo loharano hafa manana fahefana ambony izay manan-danja amin'ny indostrian'ny orinasa na ny orinasa fivarotana. Amin'izany fomba izany, afaka mahazo fidirana amin'ny rindran-tserasera ianao, izay angamba no tena sarobidy sy matanjaka mihoatra noho ny toplinks sy tranonkala hafa rehetra dia mamoaka lisitra mba hahitana ny fikirakirana fikirakirana fikirakirana. Ankoatra izany, dia mety handinika ny resadresaka fijerena orinasa azo itokisana ianao na ireo mpitoraka bilaogy malaza indrindra. Mazava ho azy, raha toa ka vonona ianao ary vonona ny handoa fotoana sy ezaka sahaza ho an'ny "hahazo" izay mendrika ny loharano mendrika. Ary tsarovy ny adihevitry ny seha-pifandraisana - amin'ny farany, mety ho sarobidy kokoa noho ny famoahana azy ireo - ary mety ho "mahazo" miaraka amin'ny fako amin'ny votoatinao manokana, toy ny lahatsoratra momba ny kalitao na ireo hafatra manan-danja.
Mitadiava Backlinks Topy Maso Eran-tany Hanomboka
Tsy ilaina ny milaza fa misy karazana tambajotra sosialy isan-karazany ampiasain'ny marika sy orinasa marobe mba hananganana ny fahefany sy hanangona backlinks fotoana mitovy. Fa ny tenako manokana dia mamolavola ny fanolorana ny mombamomba anao amin'ny Google Plus, Instagram, Facebook, ary Twitter. Ataovy izany, aza adino ny mandinika ny lisitry ny orinasa eo an-toerana sy ny lisitry ny orinasa mifandraika amin'ny fametrahana ny angon-tserasera rehetra momba ny fandefasana rakitsoratra sarobidy ho setrin'izany. Farany dia manomboka amin'ny famitana ny pejy Google Google ianao, ary mandehandeha fotsiny amin'ny fikarohana mba hahitanao ny ambim-pifandraisana lehibe indrindra, ny lisitra sy ny lisitry ny orinasa mifandraika amin'ny adihevitry ny resaka na ny tsena nasionaly Source .